Wax Badan Ka Ogow Xidhiidhka Khayre iyo Musharax Odawaa – KHAATUMO NEWS
Wax Badan Ka Ogow Xidhiidhka Khayre iyo Musharax Odawaa
Waa sadex sanadood gudahood kuraasta ayaa la kala badeshay , 2016 Khayre wuxuu fadhiyey kursiga ugu danbeeyaa Odawaana kursiga ugu sareeya, 2019 Khayre wuxuu fadhiyaa kursiga ugu sareeya odawaana kursigii Khayre fadhiyey 2016, Mahad Salaadna halkiisii ayuu fadhiyaa. Waxaase Sawirka danbe ku soo biiray Fiqi.
2016 Khayre wuxuu ka mid ahaa kooxdii Damujadiid iyo Qabyo ninkeedaa dhamaystira, wuxuuna kulankaas Odawaa ku siinayey akhyaarta Khayre ka mid yahay qaabka ay Damujadiid iyo Xasan Shiikh Maxamuud u soo noqon lahaayeen.
Kulankan 2019 Odawaa ayaa wuxuu doonaya in uu xilka Madaxweynaha Galmudug qabto, Odawaa oo Khayre saaxiibkii ah ayaa isu abaal sheeganaya, waa rag aad isu yaqaana arrimo badana soo dhex mareen.
Sidaas oo ay tahay ayaa filimka loo jilaa bulshada caadiga ah, gaar ahaan xilligan oo Khayre u yahay NN xidig, isla markaana Damujadiid iyo Xasan Shiikh Maxamuud dad badani u arkaan in ay faro ba’an isku hayaan, NN iyo Damujadiid waa akhyaar abaal badan isu haya ,suuqa siyaasadda ee Soomaaliyana xilligan ka calan walaynaya
Previous Post: CILMI BADAN Iyo CAMAL YAR
Next Post: Daawo:Maydka Cali Dheere Oo Muqdisho La keenay.